Nhau - Tehold Chibage Mill Machine
Chibage cheChibage, chinova chirongwa chine budiriro yevanhu, hupfu hwechibage hunosimudza vanhu uye hunounza mabhenefiti. Chibage Hupfu Muchina unokurumidza kusimudzira mune dzekurima dzakasimukira nyika, isu tinogadzira chibage chigayo muchina makore anoda kusvika gumi kubvira 2008.Ruzhinji rwatove nemakwikwi kwazvo, Mumakore mashoma apfuura, isu takaramba tichivandudza tekinoroji kusangana zvakasiyana musika zvido. Isu tinogadzira chibage furaini muchina kubva kudiki inokwana 5 tani pazuva kusvika Kuzere-auto Chibage Kugaya Chidimbu 500 TPD. Hukuru hwekugona hwakakwirira kumisikidzwa, inoenderana yekupedzisira hupfu hwekudzora chiyero uye hupfu mhando.
Chibage hwokugaya hwakabvira Machine
YeTeve, Africa yakafanana nenyika yechipiri, nekuda kwevakawanda vatengi ipapo. MuKenya, vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe kubva muzana vanodya chikafu chichena chechibage sechikafu chavo chikuru "Ugali", hupfu hunotengeswa mu1 kg kana 2 kg bhegi, bheri rimwe nerimwe rine mabhegi gumi nemaviri Vari muUganda, vanhu vanofarira hupfu hwechibage hwakatsetseka. : Inogona kuburitsa zvigadzirwa zvekupedzisira zvakasiyana zvinosangana nezvinodiwa nevatengi .Mukuita kwedu chibage chemuchina, isu tinotora degerminator kusarudza utachiona hwechibage muchikamu chekuchenesa, uye masefa anotarisa upfu giredhi. Hupfu hwechibage uye grits yegorosi seyakagadzirwa zvakanyanya, nechigadzirwa Huchi hwegorosi uye bran. Hupfu hwezviyo neupfu hwechibage dzimwe nguva zvinoshandiswa kugadzira Kudya kwemangwanani，nepo hutachiona hwechibage hwaigona kusarudzwa kugadzira oiri nehavi yekugadzira chikafu chemhuka.
Paunoronga kudyara furawa yekugaya fekitori, ndapota ita ongororo yemusika, senge zviyo zvakasvibirira uye chigadzirwa chekupedzisira mumusika weko, kana iwe uchifunga zvekutengesa kunze, usakanganwa zvinoda kudya vanhu ipapo.Kana iwe uchida chero rutsigiro, ndapota usazeza Bata nesu.